Nei GDPR Yakanakira Kushambadzira KweDhijitari | Martech Zone
Nei GDPR Yakanakira Kushambadzira kweDhijitari
Chipiri, June 26, 2018 Chipiri, June 26, 2018 Larry Harris
Chiremera chakakura chemutemo chinonzi iyo General Data Protection Regulation, kana GDPR, yakatanga kushanda Chivabvu 25. Nguva yakatarwa yaive nevatambi vazhinji veshambadziro vachikwikwidza uye vamwe vazhinji vainetseka. GDPR inozobhadharisa mutero uye ichaunza shanduko, asi zvachinja vatengesi vedigital vanofanira kugamuchira, kwete kutya. Heino chikonzero:
Kupera kwePixel / Cookie-Yakavakirwa Muenzaniso Yakanaka Kune Iyo Indasitiri
Chokwadi ndechekuti izvi zvainge zvareba. Makambani anga achidhonza tsoka, uye hazvishamise kuti EU irikutungamira mubhadharo kumberi uku. Iyi ndiyo kutanga kwekuguma kweiyo pixel / cookie-based modhi. Nguva yekuba data uye kukwenya dhata kwapera. GDPR inozokurudzira kushambadzira-inotungamirwa nedata kuti ive yakawanda yekupinda-mukati uye mvumo-based, uye ichapa nzira dzakapararira senge kudzokororazve uye kumakisazve kushomeka kunoparadza uye kusagadzikana. Shanduko idzi dzinozounza nguva inotevera yekushambadzira kwedhijitari: kushambadzira kwevanhu, kana izvo zvinoshandisa yekutanga-bato dhata pane yechitatu-bato dhata / kushambadzira-kushambadzira.
Maitiro Akashata Emaindasitiri Achadzora
Makambani anovimba zvakanyanya nehunhu uye pamwe neanogona kutariswa mamodheru anozokanganiswa zvakanyanya. Izvi hazvireve kuti zviitwa izvi zvinonyangarika zvachose, kunyanya sezvo zviri pamutemo munyika zhinji dziri kunze kweEU, asi nzvimbo yedhijitari inozoenda kune data-rebato rekutanga uye kushambadzira kwemamiriro. Iwe unotanga kuona dzimwe nyika dzichiita akafanana seti emirau. Kunyangwe makambani anoshanda munyika dzisiri hunyanzvi kuwira pasi peGDPR anonzwisisa chokwadi chemusika wepasirese uye anozoteerera kunhungamiro iri kufurwa nemhepo.
Yakareba Yakadarika Dhata Kuchenesa
Izvi zvakanaka kushambadzira uye kushambadzira muuzhinji. GDPR yakatokurudzira mamwe makambani muUK kuti aite zvekuchenesa dhata, semuenzaniso, kuteedzera pasi avo eemail zvinyorwa neanosvika maviri-matatu. Mamwe emakambani aya ari kuona yakakwira yakavhurika uye nekudzvanya-kuburikidza nemitengo nekuti iyo data yavanayo iye zvino iri nani mhando. Izvi ndezvechokwadi, chokwadi, asi zvine musoro kuronga kuti kana data rakaunganidzwa riri pamusoro-pabhodhi uye kana vatengi vachida uye vachiziva kupinda, iwe uchaona yakakwira mitengo yekubatanidzwa.
Yakanaka Kune OTT
OTT Zvinomiririra Zvakanyanyisa, izwi rinoshandiswa kuendesa zvemufirimu neTV zvemukati kuburikidza neinternet, pasina kuda kuti vashandisi vanyore kuchinyakare tambo kana satellite inobhadhara-TV sevhisi.
Nekuda kwehunhu hwayo, OTT yakave yakachengetedzwa kubva kuGDPR kukanganisa. Kana iwe usina kusarudzwa mukati, hauna kutarirwa, kunze kwekunge, semuenzaniso, urikupofomadzwa paYouTube. Pakazara, zvakadaro, OTT yakanyatsokodzera ino shanduko yedhijitari.
Yakanaka Kune Vaparidzi
Zvingave zvakaoma munguva pfupi, asi zvichave zvakanaka kune vaparidzi munguva refu, kwete kusiyana nezvatiri kutanga kuona nemakambani anotarisira e-mail dhatabhesi. Aya ekumanikidza dhata kuchenesa anogona kunge ari ekutanga jarring, sezvambotaurwa pamusoro, asi GDPR-inoenderana makambani ari kuonawo vamwe vanoita chinyoreso.
Saizvozvowo, vaparidzi vanozoona vatengi vazhinji vanobatirana zvemukati mavo nema stringent opt-in maprotocol munzvimbo. Ichokwadi ndechekuti vaparidzi vaive vasinaadaisic nemasaini uye vakapinda-mukati kwenguva yakareba. Iyo yakasarudzika-mamiriro eiyo GDPR nhungamiro yakanaka kune vaparidzi, nekuti ivo vanoda yavo yekutanga-bato dhata kuti ive ine simba.
Kupiwa / Kubatanidzwa
GDPR iri kumanikidza iyo indasitiri kuti ifunge zvakaoma nezvekuti inosvika sei kupihwa, iyo yakavezwa pamusoro kwenguva yakati ikozvino. Zvichava zvakaoma kune spam vatengi, uye zvinomanikidza iyo indasitiri kuendesa yakasarudzika zvemukati izvo izvo vatengi vanoda. Iyi nhungamiro mitsva inoda kuti vatengi vatore chikamu. Izvo zvinogona kuve zvakaoma kuita, asi mhedzisiro ichave yepamusoro mhando.
Tags: shambadzaarributionkudzayiCookiesdata lenzidigital advertisingGDPRipapoZvakanyanyisaPixelTrackingyekutevera pixel
Larry Harris ndiye CEO weSightly, inoshanda vhidhiyo kushambadzira chikuva iyo inoshandisa vanhu-yakanangana nekunanga kuenzanisa vatariri nevanoenderana neakakodzera mavhidhiyo kushambadzira.
Kuvimbika: Dhata Kuvimbika Zvishandiso kune Yako CRM Kutungamira
Friendbuy: Referral Zvirongwa, Referral Tracking, uye Referral Campaign Optimization